Dagaal yahamiinta Alshabaab oo si buuxda ula wareegay degmada Balcad - Warar Sugan - Soomaaliya iyo caalamka
HomeWararkaDagaal yahamiinta Alshabaab oo si buuxda ula wareegay degmada Balcad
Balad, August 8, 2020 (hornnews24) – Ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan ururka Alshabaab ayaa maanta aroortii hore dagaal kula wareegay Degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya.
Alshabaab ayaa jihooyin kala duwan weerar uga soo qaaday magaaladaasi taas oo u suura gelisay in ay ka itaal roonaadaan ciidamadii halkaasi ku sugnaa oo la sheegay in ay u firxadeen dhinaca magaalada Muqdisho.
Wararku waxay intaasi ku darayaan in markii ay magaalada gacanta ku dhigeen ururka Alshabaab ay xabsiga magaaladaasi ka sii daayeen dad badan oo shacab ah oo ku xirnaa. Balcad ayaa ah magaalo istaraatiiji ah oo 30 KM oo kali ah u jirta magaalada Muqdisho, arrintaanina waxay dharbaaxo culus ku tahay dowladda Soomaaliya.
Sarkaal u hadlay ciidamada dowladda ee dagaalka looga itaal roonaaday ayaa sheegay in ay jiraan dhimasho iyo dhaawac labada dhinac soo kala gaaray wuxuuna ku andacooday in ay ciidamada dowladdu iska caabiyeen weerarka Alshabaab.